डुंगा चढ्नुअघि एन्जलले भनेका थिए- अब ८-१० दिन फोन लाग्दैन, चिन्ता नगर्नू :: नारायण खड्का :: Setopati
डुंगा चढ्नुअघि एन्जलले भनेका थिए- अब ८-१० दिन फोन लाग्दैन, चिन्ता नगर्नू
बुवा भन्छन् - मैले त छोरा गुमाएँ, गलत तरिकाले छोराछोरी अमेरिका नपठाउनु होला
दाङ, असार २६
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढामगर यतिखेर विछिप्त छन्।
उनका २१ वर्षीय छोरा एन्जल बुढामगर चोर बाटोबाट अमेरिका जाने क्रममा कोलम्बियाको क्यारेबियन सागरमा असार ७ गते डुंगा दुर्घटना हुँदा बेपत्ता छन्।
दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेका अनुसार पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकाको हापुरेका रमेश बैठामगर र नेपालगञ्ज घर भइ पछिल्लो समय तुलसीपुरस्थित ससुरालीमा बस्दै आएका हेमराज अधिकारी पनि डुंगा दुर्घटनामा परि बेपत्ता रहेको सूचना आएको छ।
उक्त डुंगा दुर्घटनामा परी दाङसहित नेपालका सात जना युवाको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको छ।
घोराहीका एजेन्ट टोपबहादुर जिसीले अमेरिकको सपना देखाएपछि उनकै माध्यमबाट आफ्नो जेठो छोरा एन्जल गत चैत महिनाको ८- ९ गतेतिर घरबाट हिँडेको वडाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिए।
‘मेरा दुई छोरामध्ये एउटा छोरा गुमाउनु परेको छ,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘चोर बाटोबाट गलत तरिकाले कोही कसैले पनि सन्तान अमेरिका पठाउने काम नगर्नुहोला।’
आफूले अबैध तरिकाबाट नजान भने पनि स्थानीय मेनपावर एजेन्टले देखाएको अमेरिका सपनाका कारण छोरा अमेरिका जान लालायित बनेको उनले बताए।
यति भनेर वडाध्यक्षले फोन आफ्ना भाइ जनकलाई थमाए। उनीहरू एउटै घरमा बस्छन्। जनकका अनुसार उनीहरूको घरपरिवारले असार २१ गते भतिज एन्जलको आत्माको शान्तिको लागि भनेर सामूहिक प्रार्थना गरिसकेको जानकारी दिए।
‘हामीले क्रिश्चियन धर्म अंगालेका छौं र त्यसैले हामीले बाबुको आत्माको शान्तिको लागि गत सोमबार प्रार्थना गरिसक्यौं,’ उनले भने।
मेक्सिकोमा रहेका दाङ घोराहीको मिलनचोक बस्ने गुमान रोकाले आफूलाई भतिज एन्जल लगायत दाङका तीन जना उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएको जानकारी पहिलोपटक दिएको जनकले बताए।
जसले कोलम्बियाबाट प्रकासित खबरहरूका लिंकसहितको समाचार उनलाई म्यासेज गरिदिएका थिए। त्यसपछि बुढाको परिवारले अन्य सम्पर्क सूत्र र स्रोतसँग पनि घटनाबारे बुझ्यो।
कोलम्बियामा भएका नेपाली तथा एन्जलसँगै डुंगामा यात्रारत् र पौडिएर बाँच्न सफल बंगाली नागरिकसँग पनि जनकले आफैंले कुरा गरे। सबै स्रोतहरू बुझ्दा डुंगा दुर्घटनामा एन्जलको मृत्यु भएको निश्चित भएपछि आफूहरूले मृत्युपछिको प्रार्थना गरेको जनकले जानकारी दिए।
जनकका अनुसार एन्जलले सोमबार बिहान फोन सम्पर्क गरी आफू डुंगा चढ्न जान थालेको र अबको हप्ता दस दिन फोन सम्पर्क नहुने हुँदा नआत्तिन आग्रह गरेका थिए।
‘बाबुले मलाई डुंगा चढ्नुभन्दा पहिले फोन गरेको थियो,’ हप्ता दस दिन अब मेरो फोन लाग्दैन चिन्ता नगर्नुहोला, नआत्तिनु होला भनेको थियो,’ जनकले भने, ‘त्यो कुरा मैले परिवारका सबैलाई सुनाएको थिएँ। तर, बुधबार एन्जल सवार डुंगा दुर्घटनामा परेको कुरा पो सुन्नुपर्‍यो।’
घोराहीका टोपबहादुर जिसीको माध्यमबाट आफूले एन्जललाई अमेरिका पठाएको बताए। जनकले २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ नगद खर्च भइसकेको र अन्य थप केही रकम पनि खर्च भएको जानकारी दिए।
दुर्घटनापछि स्थानीय एजेन्ट टोपबहादुर सम्पर्कमा आउन नचाहेको जनकले गुनासो गरे।
तपाईंहरूजस्तो जान्नेबुझ्ने व्यक्तिले किन छोरा-भतिजलाई अवैधानिक बाटोबाट अमेरिका पठाएको हो? भन्ने प्रश्न गर्दा जनकले भने, ‘दुनियाँ गइरहेको हुँदा एजेन्टले अमेरिकाको सपना देखाइदिएपछि एन्जलले पनि जान्छु भनेर घरमा कर गर्‍यो। यस्तो होला भन्ने थाहा पाएको भए त कसले पठाउँथ्यो र?’
बिना भिसा गैरकानुनी रूपमा मेक्सिको सीमा क्षेत्रबाट अमेरिका छिर्न हिँडेका सात नेपाली र अन्य विदेशीहरू सवार डुंगा गत असार ७ गते कोलम्बियाको समुद्रमा दुर्घटना परेको थियो।
त्यसमा दाङ, पर्वत, म्याग्दी र स्याङ्जाका युवालाई दुई समूहमा संगठित मानव तस्करहरूले अमेरिका प्रवेश गराउन खोजिरहेका थिए।
तस्करले एउटा समूहलाई दुबई, मस्को, ब्राजिल हुँदै कोलम्बिया पुर्‍याएको थियो। त्यसैगरी, अर्को समूहलाई दुबईबाट युक्रेन, फ्रान्स हुँदै कोलम्बिया पुर्‍याएको थियो।
त्यसपछि सानो डुंगाबाट आठ नेपाली र दस बंगलादेशी नागरिक गरी १८ जना युवा जाने क्रममा डुंगा दुर्घटना भएको थियो।
उक्त दुर्घटनामा परी पर्वत कुश्माका दिनेश गौतम, पर्वतको ग्यादीका राजु गुरुङसहित सात नेपाली युवा बेपत्ता भएका थिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २६, २०७८, ०४:१८:००